रोनाल्डो मड्रिड छोड्ने तयारीमा, स्पेनिस क्लबद्धारा ८८ मिलियन पाउण्डको प्रस्ताव ! – Everest Dainik – News from Nepal
रोनाल्डो मड्रिड छोड्ने तयारीमा, स्पेनिस क्लबद्धारा ८८ मिलियन पाउण्डको प्रस्ताव !
अहिलेका महान् फुटबल खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोड्ने संकेत देखिएका छन् । उनलाई अनुबन्ध गर्न इटालियन सिरी ए क्लब युभेन्टसले चाँसो देखाएपछि रोनाल्डोले मड्रिड छोड्ने संकेत देखाएका हुन् । युभेन्टसले उनलाई अनुबन्ध गर्न स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडसँग झण्डै १०० मिलियन युरो अर्थात ८८ मिलियन पाउण्डको प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
रियल मड्रिडले रोनाल्डोका लागि आएको प्रस्तावका बारेमा विचार गरिरहेको जनाएको छ । ३३ वर्षका पोर्चुगिज रोनाल्डो रियल मड्रिडका सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनले अहिलेसम्म रियल मड्रिडबाट ४५१ गोल गरेका छन् ।
रोनाल्डोको बढ्दो उमेर तथा गएको सिजन ला लिगामा रियल मड्रिड च्याम्पियन बार्सिलोना भन्दा १७ अंक पछि रहेर लिग टुंग्याएका कारण उसले टिमलाई पुर्नताजकी गर्न चाहेकाले युभेन्टसले रोनाल्डोका लागि प्रस्ताव गरेको हो । रोनाल्डोले गएको मे मा रियल मड्रिडबाट पाँचौँ पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेका थिए ।
युभेन्टसले रोनाल्डोका लागि प्रस्ताव गरेको रकम उसले अहिलेसम्म कुनै पनि खेलाडीलाई तिरेको सबैभन्दा धेरै हुनेछ । उसले सन् २०१६ मा अर्जेन्टिनाका गोन्जालो हेगुइनलाई ९० मिलियन युरो तिरेर क्लब भित्र्याएको थियो । रोनाल्डो सन् २००९ मा त्यो बेलाको विश्व कीर्तिमानी मूल्य ८० मिलियन पाउण्डमा म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल मड्रिड आएका हुन् ।